Eeritraatti lakkoofsi namoota Covid-19'n qabaman jaha gahe - BBC Afaan Oromoo
Eeritraatti lakkoofsi namoota Covid-19'n qabaman jaha gahe
25 Bitooteessa 202025 Bitooteessa 2020
Biyya Ertiraatti lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii jaha gahu Ministeerri Fayyaa biyyattii beeksise. Mootummaan Ertiraa tatamsa'ina dhukkuba kanaa ittisuuf gaafa Roobii halkan walakkaa irraa eegalee balalii Ertiraa irraa ka'us ta'e gara Eertiraatti taasifamu dhorkeera.
Weerara COVID19'f qophiin Itoophiyaa akkam jira?
Chaayinaan lammilee biyyootaa alaatti karra cufatte
Ameerikaatti lammiileen miliyoona 3.3 hojii dhabdoota taane jedhan
Abbaan Alangee Federaalaa dabalataan himannaa 39 adda kute
Ameerikaatti guyyaa tokkotti namoonni 10,000 COVID-19 qabaman
Waliirraa fageenya hawaasummaa eeggachuun maalif barbaachisaa?
Seeneetiin Ameerikaa baajata yeroo atattamaaf Dolaara Tiriilyoona 2 ramade
Namni umuriin ganna 97 ta'an Covid-19 irraa fayyan
Covid-19'n mootummaan aangoorraa akka ka'u taasise
...tti maxxanfame 18:46 26 Bitooteessa 202018:46 26 Bitooteessa 2020
Kan har'aa xumurree jirra.
Gadi dabarsaati odeessaalee kallattiin isin biraan gahaa turre dubbisaa. Nagayaan bulaa!
...tti maxxanfame 18:41 26 Bitooteessa 202018:41 26 Bitooteessa 2020
Amma nu gaheEeritraatti lakkoofsi namoota COVID19'n qabaman jaha gahe
Guyyaa Kamisaa namooti dabalataa lama vaayirasichaan qabamuu isaani Ministeerri Fayyaa biyyattii beeksisee jira.
Namoonni kunneen xiyyaara 'Air Dubai'n Dubaay irraa Wiixata Bitootessa 23 gara Eertiraa kan dhufanidha.
Mootummaan biyyattii Jimaata irraa eegalee manneen barnootaa hundi akka cufaman akkasumas tajaajilli geejjibaa gara garaa akka dhaabbatu murtaa'eera.
Biyyattiin Roobii halkan walakkaa irraa eegalee balaliisa Ertiraa irraa ka'us ta'e gara Eertiraatti taasifamu dhorkitee turte.
...tti maxxanfame 18:14 26 Bitooteessa 202018:14 26 Bitooteessa 2020
Qophiin Itoophiyaan weerara koronaavaayirasii to'achuuf amma dura taasiste maal fakkaata?
Akka direektarii waliigalaa tajaajila fayyaa Ministeera Fayyaa Itoophiyaa Yaaqoob Seemaan jedhanitti:
Itoophiyaan Dilbata darbe halkan walakkaa irraa eegalee namooti biyya alaarraa dhufan dirqama guyyoota 14'f adda of baasanii akka turan erga labsitee booda hoteelota 8 fi dhaabbilee barnoota namoonni 5000 keessa turuu danda'an qopheessiteetti.
Torbee lamaan itti aanan keessatti namoota 21,000 keessummeessuu akka danda'uuf karoorfamee hojjetamaa jira.
Jiddugalawwan namoonni mallattoo COVID19 qaban ykn kanneen warra vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'e waliin qunnamtii qaban adda baafamanii keessa tursiifaman keessatti sireewwan 1200 qophaa'anii jiru.
Torbanoota itti aanan keessatti lakkoofsa siree kana 12500'niin gahuuf hojjetamaa jira.
Warra vaayirasichaan qabamanii yaala meeshaan deeggarame barbaadaniif - mekaanikaal ventileetarii 343 (kan walumaagalatti biyyattiin qabdu) keessaa 301 qofatu hojjeta.
Erga weerarro vaayirasichaa mudateen booda dabalataan mekaanikaal veentileetariin 134 dabalataan argameera.
Sadarkaa naannoleettis jiddugalawwan hundeessuufi meeshaalee barbaachisoo guutamuufi qaban guutuuf hojii hojjetamaa jiraachuu MM Abiy himaniiru.
Rakkoo weerarri kun sadarkaa biyyaatti geessisuu malu ittisuuf koreen maallaqaafi leeccaloo walitti qabu hundaa'eera.
MM Abiy ergaa waamicha biyyaalessaa dabarsanii jiru.
Quote Message: Yeroo kanatti naasuu, sodaafi dhiphachuu keessaa baanee galteewwan qabnu hunda walittiqabuudhaan gara Koree Deggarsa Biyyoolessaatti fiduudhaan gumaacha haa goonu.
Yeroo kanatti naasuu, sodaafi dhiphachuu keessaa baanee galteewwan qabnu hunda walittiqabuudhaan gara Koree Deggarsa Biyyoolessaatti fiduudhaan gumaacha haa goonu.
...tti maxxanfame 17:36 26 Bitooteessa 202017:36 26 Bitooteessa 2020
Mootummaan Chaayinaa weerara koronaavaayirasii ittisuuf lammileen biyyoota alaa gara biyyashee akka hin seenne dhorkite.
Lammileen biyyoota alaa gara Chaayinaa imaluuf Viizaa argatan akkasumas kan achi jiraachuuf hayyama qaban biyyattii akka hin seenne dhorkamanii jiru.
Mootummaan Chaayinaa murtee kanarra kan gahee biyyattii keessatti namoonni wayita ammaa vaayirasichi irratti argamaa jiru warra biyya alaa irraa galaa jiran waan ta'eefi jedhameera.
Dhorki kun guyyoota lama booda hojiirra ooluu eegala.
...tti maxxanfame 17:27 26 Bitooteessa 202017:27 26 Bitooteessa 2020
Amma nu gaheItaliitti duuti namoota koronaavaayirasiin qabamanii 662'n dabale
Sa'aatii 24 drban keessatti Italiitti lakkoofsi namoota sababa koronaavaayirasiin du'anii 662'n dabalee 8,165 gahe.
Walumaagalatti namoonni vaayirasichaan qabaman ammoo 80,539 gaheera.
...tti maxxanfame 15:59 26 Bitooteessa 202015:59 26 Bitooteessa 2020
Amma nu gaheKeeniyaatti namni jalqabaa koronaavaayirasiin du'e
Keeniyaa keessatti namni jalqabaa koronaavaayirasiin du'uu Ministeerri Fayyaa biyyattii beeksise.
Namni ganna 66 lammii Keeniyaa du'e kun, Bitootessa 13 Afrikaa Kibbaa irraa ka'e Siwaaziilaandi keessa darbe gara Keeniyaa kan galeefi qorannoo taasifameefiin koronaavaayirasii qabaachuun isaa kan mirkanaa'e dha.
Namni kun duraanuu dhibee sukkaaraa qaba ture.
Hospitaala Aghaa Kaan jedhamutti kutaa namoonni haalaan dhukkubsatan keessatti yaalaman 'intensive care unit' keessatti yaalamaa ture jedhe Ministeerri Fayyaa biyyatti.
Amma dura Keeniyaa keessatti namoonni 31 koronaavaayirasiin kan qabaman yoo ta'u namoonni sadi har'a kutaa biyyaa Kiliifii fi Naayiroonii keessatti qabamuun isaanii kan mirkanaa'edha.
...tti maxxanfame 13:18 26 Bitooteessa 202013:18 26 Bitooteessa 2020
Sababa koronaavaayirasiin sochiin diinagdee Ameerikaa ugguramuun wal qabatee hojii dhabdummaan sadarkaa olaanaa amma dura mul'atee hin beeknerra gahe.
Torban darbee keessa qofa lammileen biyyattii miliyoona 3.3 ol ta’an faayidaa hoji dhabdooti argatan akka kennamuuf iyyataniiru.
Biyyattiin amma dura lakkoofsa hoji dhabdootaa olaanaa kan galmeessifte bara 1982 wayita namoonni 650,000 hojii dhabdoota ta'uu isaanii hojjetan ture.
Baayyinni hojii dhabdummaa kunis sababii koronaavaayirasiittin walqabatee restoraantoonni, manneen dhugaatii, sinimaa, hoteelootaa fi jiimiin hedduun waan cufamaniif jedhameera.
Warshaaleen oomisha konkolaataas akkasuma hojii kan dhaaban yoo ta’u, imalli daandiiwwan qilleensaa hedduunis ugguramee jira.
...tti maxxanfame 10:52 26 Bitooteessa 202010:52 26 Bitooteessa 2020
Abbaan Alangee Federaalaa tatamsa’ina koronaavaayirasii ittisuuf guyyaa har’aa himannaa himatamtoota 39 adda kutuu isaa beeksise.
Kunneen kan guyyaa kaleessaa Abbaan Alangee Federaalaa Aadde Adaanach Abeebee ibsaniin dabalataattidha.
Kaleessa 4,011 kan ta’an akka dhiifamaan gadhiifaman ibsamee ture.
Attorney GeneralCopyright: Attorney General
...tti maxxanfame 9:55 26 Bitooteessa 20209:55 26 Bitooteessa 2020
Sababa Covid-19tiif dhorkaa labsame jalaa ba'uuf cidha ariifachiisaa gaggeeffame
Angaa'onni Awustraaliyaa cidha irratti namootni shanii ol akka hin argamneef qajeelfama dabarsuuf akka jedhan beeksisuu isaaniin booda saatii 24 keessatti namootni hedduun ariitiin cidha isaani gaggeefataniiru.
Mootummaan namootni hedduminaan akka walitti hin qabamnee gochuuf qajeelfama dabarsuuf jedhu kanaan cidha irratti namootni shan qofti argamu danda'an misirroowwan lamaan dabalateeti.
Qajeelfamni kun hojiirra ooluuf kan ture Roobii halkan walakkaa irraa eegalee yoo ta'u cidha karoorfatanii namootni turan hamaamotaa waliin saganticha godhachuuf jecha dursanii cidha isaanii godhataniiru.
Qajeelfama dhorkii kana booda filannoon jiru cidha ofii namoota waliin godhachuu ykn guyyaa hin beekamneef cidha isaanii achii siiqsuudha. Dabalataaniis cidha isaani namoota murtaa'een gochuun maatiifi hir'iyyoonni biro immoo lafa jiranii inteerneetaan akka hordofuun gochu ni danda'u jedhameera.
Sababa dhorkii kanaan cidhashee paarkii Kuwiinsilaand keessatti kan gaggeessite gazexeessituun Bindii Irwiin firooti ishee dhiyoo ta'an qofa cidhicharratti akka hirmaatan dubbatti. "Gara waggaa tokkoof guyyaa kanaaf qophaa'aa kan turre ta'us, waan hunda geeddaruuf dirqamneerra.
Cidha keenya irratti keessumanni hin jiran ture" jechuu haala ture barreessiteetti. "Murteen kun murtee rakkisaa ture, garuu fayyaa nama hundaaf jennee waan barbaachisaa gochuun nurra jirudha," jettetti.
...tti maxxanfame 9:33 26 Bitooteessa 20209:33 26 Bitooteessa 2020
Mootummaan naannoo Tigraay labsii muddamaa labse
Tig TVCopyright: Tig TV
Mootummaan naannoo Tigraay labsii weerara koronaavaayirasii ittisuuf yeroo muddamaa labse. Labsii yeroo muddamaa weerara dhibee Koronaavaayiras ittisuuf labsame torbeewwan lamaaf tura jedhameera.
Labsiin kanaan sochiin baadiyyaadhaa gara magaalaatti, magaalaa magaalattifi magaalaa baadiyaatti taasifamu torbeewwan lamaaf akka dhaabbatu murtaa'usaa preezidaantii itti-aanaan mootummaa naannoo Tigraay Dr Dabratsiyoon G/Mikaa'el ibsa har'a kennanin beeksisaniiru.
Gabaawwan namootni itti baay'atan dhorkamaniiru. Akkasumas qophiileen akka cidhaafi dhibaayyuu ekeraa akka hin adeemsifamne naannichi murteessera. Dabalataan dhaabbileen daldalaa, bashannanaa, mannen jimaa fi mannen shubbisaa akka cufaman fi dorgommiilen kubbaa miilaa akka hin adeemsifamne murtaa'era.
...tti maxxanfame 7:33 26 Bitooteessa 20207:33 26 Bitooteessa 2020
Malawwan tatamsa'ina koronaavaayirasii kana hir'isuuf tarkaanfii ummanniis cimee irratti akka hojjatuuf jajabeefamu keessaa tokko fageenya hawaasummaa eeggachuudha.
Namni tokko isa kaan irraa yeroo taa'us ta'e yeroo dhaabbatu meetira tokkoo ol fagaachuu, akkasumas harka walfuudhuu dhiisuudha.
Haalli kunis erga waa qabatameen booda dafanii dafanii harka saamunaafi bishaaniin dhiqachuutti dabalamee, koronaavaayirasii irraa ofiifi maatii ittisuuf ni gargaara.
Mee bu'aa waliirraa fageenyi hawaasumaa qabaatu kan asiin gadii kanarraa dubbifadhaa.
...tti maxxanfame 7:05 26 Bitooteessa 20207:05 26 Bitooteessa 2020
Ameerikaa keessatti namoonni COVID-19'n du’an 1,000 darbe
Akka tamsaasa kallattii yunivarsiitii Joon Hopkiinsiin dhiyaataa jirutti, lakkoofsi namoota Covid-19'n Ameerikaa keessatti du’anii 1,000 darbeera.
Akkasumas biyyattii keessatti namoonni 68,171 ammoo koronaavaayirasiin qaqqabeera.
...tti maxxanfame 7:03 26 Bitooteessa 20207:03 26 Bitooteessa 2020
UK keessatti namoonni Covid-19n du'an 463 qaqqabeera
UK keessatti lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin dua’nii 422 irraa 463’tti ol dabaleera.
Lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii ammoo 8,007 irraa gara 9,529’tti ol guddateera.
Namoota 97,019 qorannoo vaayirasichaa taasisan keessaa 87,490 kan ta’an bilisa ta’aniiru.
...tti maxxanfame 6:37 26 Bitooteessa 20206:37 26 Bitooteessa 2020
Gorsaan pirezidantii DRC koronaavaayirasiin du’an
Gorsaan pirezedaantii Rippabilika Dimokiraatawaa Koongoo (DRC) koronaavaayirasiin du’an.
Rippabilika Dimookiraatawaa Koongoo keessatti namoota dhibee Covid-19n du’an sadii yoo ta’an tokko gorsaa pirezidantiifi ogeessa mirga namoomaafi seeraa kan ta’an Jiin Jooseef Mikendii Waa Mulumbaadha.
Mulumbaan gorsaa Pirezidant Feliiksi Tishekeedee ta’uun hojjechaa turan.
Dhimmoota mirgoota namoomaafi sochii paartilee siyaasaa mormitootaa keessatti Mulumbaan ga’ee guddaa qabu turan.
Rippabilika Dimokiraatawaa Koongaa keessatti namoonni 48 ta’an koronaavaayirasiin kan qabaman yoo ta’u gaafa Kibxata daangaan biyyattii hunduu akka cufamuufi Kinishaasaan naannolee biroo waliin walitti dhufeenya akka addaan kuttu murtaa’eera.
Oduu walfakkaatuun gargaaraan pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhaammadu Buhaariis koronaavaayirasiin qabamuun himamaa jira.
Aanga’aan ol-aanaa tokko BBCf akka mirkaneessanitti gorsaan pirezedaantichaa Abbaa Kiyaar koronaavaayirasiin qabamuun isaanii beekameera.
“Harka mirgaa” pirezidant Muhaammaduu Buhaarii kan ta’an Abbaa Kiyaar umuriin isaanii ganna 70 keessa jira.
Abbaa Kiyyaar ji’a darbe keessa aanga'oota biroo waliin ta’uudhaan biyya Jarman daawwatanii turan.
Bakka adda itti baafamanii turan keessa akka hin taane kan himame yoo ta’u aanga’oonni ol-aanoo 16 ta’an Abbaa Kiyaar waliin walitti dhufeenya qabaataa turuun beekameera.
...tti maxxanfame 5:12 26 Bitooteessa 20205:12 26 Bitooteessa 2020
Koronaavaayirasiin bulchiinsi Kosoovoo aangoorraa akka ka’u gargaare
Miseensonni mana maree Kosoovoo bulchiinsa mootummaa Kosoovoo irraa amantaa dhabuu yaada dhihaate deeggaranii jennaan mootummichi diigame.
Bulchiinsi Ministira Muummee Albin Kurtii erga gara aangootti dhufee reefuu ji’a lama ture.
Bulchiinsa MM Albin irratti sagaleen amantaa dhabuu paartii isaan waliin qindoome dalaguun paarlaamaatti dhihaate jennaan garuu miseensonni kunneen deeggaraniiru.
Amantaa dhabuun kun adeemsi bulchiinsichaa dhukkuba koronaavaayirasii ittisuurratti taasise laafaadha jedhameeti.
Haata’u malee, sababa dhukkuba kanaan filannoon waan hin taasifamneef akkitit furamuu malu ifa hin taane.
Hanga ammaa biyya Baalkaan kana keessatti namoonni 70 dhukkuba kanaan yoo qabaman, duuti tokko immoo galmaa'eera.
...tti maxxanfame 4:56 26 Bitooteessa 20204:56 26 Bitooteessa 2020
Namni umrii waggaa 97 COVID-19 irraa fayyan
Oduu namoota dhukkuba koronaavaayirasiin qabamaniifi du’anii keessaa oduun kuni adda.
Akka miidiyaan Kooriyaa Kibbaa ‘Yonhap News’ jedhamu gabaasetti jaartiin umrii 97 dhukkuba addunyaa yaaddesse kanarraa bayyanataniiru.
Kunis, Kooriyaa Kibbaatti nama duraa umrii kanaan dhukkuba kanarraa fayyan ta’an jedha gabaasni kuni.
Waa’een jaartii kanaa garuu ammatti wanti dabalataa argame hin jiru.
Haa ta’u malee, namni umrii kanaan bayyanate isaan qofa miti.
Jalqaba ji’a kana keessa miidiyaan mootummaa Chaayinaa Shinuwaan jaarsi umrii 100 dhukkuba kanarraa fayyaniiru jedhee ture.
Akka gabaasa miidiyaa kanaatti, jaarsi kuni namoota hanga yoonaa bayyanatan keessaan umriin guddicha.
...tti maxxanfame 4:52 26 Bitooteessa 20204:52 26 Bitooteessa 2020
Seeneetiin Ameerikaa balaa sababii koronaavaayirasiin uumameef baajata yeroo atatamaa kanaaf oolu Dolaara Tiriiliyoona 2 ramadeera.
Baajanni ramadame kun seenaa dinagdeen Ameerikaa keessatti dinagdee dadamaqsuuf baajata ramadame isa guddichadha.
Karoorri baajata ramadamee kanaa $1,200 Ameerikaatti namoota umurii ga’eessummaarra jiraniif kallattiin kaffaluuf, akkasumas hojjetoota biizinasii xixiqqaa keessa jiran kaffaltiin isaanii akka foyyaa’u gargaruudhaaf jedhameera.
...tti maxxanfame 4:50 26 Bitooteessa 20204:50 26 Bitooteessa 2020
Guyyaa tokkotti Ameerikaatti namoonni 10,000 caalaa Covid-19’n qabaman
Dhaabbanni Ameerikaa to’annoo dhibee irratti dalaguun beekamu, CDC, kaleessa yeroo ibsetti dhukkubsattoonni 54,000 ol ta'an qabamuu ibsee ture.
Yeroo ammaa akka gabaasni kallattii Yunivarsiitii Joon Hopkiins ibsutti garuu 69,000 gaheera.
Dabalata: Asii dubbisaa